Turkey Noqday Ganacsiga Route intooda badan oo Muhiim ah | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTurkey Noqday Ganacsiga Route intooda badan oo Muhiim ah
Turkey Noqday Ganacsiga Route intooda badan oo Muhiim ah
04 / 11 / 2017 06 Ankara, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, TURKEY
Gaadiidka, Wasiirka Arrimaha iyo Communications Maritime Ahmet Arslan ee arrinta November ee Macalester Raillif "Turkey noqday ee Ganacsiga Route intooda badan oo Muhiim ah" waxaa la daabacay maqaal cinwaankiisu yahay.
Dalkeenu wuxuu leeyahay faa iido weyn xagga xaga saadka iyo gaadiidka sababtuna tahay meeqa juqraafi ahaan, udhawaanshaha suuqyada caalamka, soosaarka hoose iyo qarashka shaqada. Waxaa iska cad inaan khibrad weyn u leenahay xagga duulista caalamiga. Maanta, diyaaradaha xamuulka qaada ee Turkiga waxay ka shaqeeyaan juqraafi balaaran oo ku sii fida Kazakhstan iyo Mongolia ee bariga, Boortaqiiska iyo Morocco dhanka galbeed, Suudaan dhanka koonfureed, Cumaan iyo Noorway waqooyiga.
Halkaa markan waxaan ka shaqeynaynay 15 sanado, si aan ugu dar dar galno awooda wadankeena xaga gaadiidka. Sidoo kale, sannadihii ugu dambeeyay, waxaa jiray kacaan dhammaystiran oo lagu sameeyay waddooyinkeenna, jidadkeenna tareenka, duulista iyo badahayada. Dherer waddo dherer ah laga bilaabo 6 kun 101 kiiloomitir ilaa 25 kun 496 kiiloomitir, BSK dhererkiisu wuxuu daboolayaa xNUMX kiloomitir 8 kiiloomitir, 652 bin22 kiiloomitir, tunerooyin laga soo bilaabo 118, 83 illaa 312 kiiloomitir. Shabakada tareenka 50 waxay ka kordhay kumanaan 365 kiiloomitir ilaa xNUMX kiiloomitir, halka ku dhowaad dhammaan shabakadahayaga tareenka la cusbooneysiiyay. Dalkeennu wuxuu galay horyaal waddamada ka shaqeeya tareenka xawaare dheer. Xawaareynta iyo canshuuraha ayaa hoos loo dhigay xilliyada badda iyadoo maalgashiga la kordhiyay. Xaddiga xamuulka gacanta ku haya dekeddeena ayaa ka kordhay 10 milyan oo tan ilaa 959 milyan oo tan. Tirada gawaarida diyaaradaha ee firfircoon ayaa ka kordhay 12.532 ilaa 189,9.
Tirada tuulooyinka logistic ee bixin kara dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin waaxda lojistikada ayaa ku kordhay 8 oo ay weheliso Xarunta Saadka ee Kahramanmaraş (Türkoğlu) ee aan bilownay Oktoobar. Xaruntan ayaa bixin doonta adeegyo saadka oo laga bilaabayo Bariga iyo Koonfur-bari ee Anatolia ilaa Badda Mediterranean-ka. Laakiin ka sii muhiimsan, dhammaan maalgelinta in aan la dhigtay line our tareenka 30 Baku-Tbilisi Kars caleemo bishii October waxa ay Turkey wadada ganacsiga ugu muhiimsan ee u dhexeeya Shiinaha iyo Europe ka dhigi doonaa.
Tareenka Taariikhda Dhaqanka wanaajinta
Wadada yaryar ee taariikhiga ah waxay noqoneysaa "tareenka" ...
Dhismaha Dhismaha Malatya Wagaa Lama Saarin, Saadka ayaa Muujinaysa Xarunta Ganacsiga
Ogeysiinta Ugaarsiga: Sahanka iyo adeegyada latalinta mashruuca ayaa la qaadi doonaa ((Andon Ilıcası ası)
Caucasus ma noqon kartaa Habka Ganacsiga Caalamiga ah?
Gaadiidka tareenka ee ganacsiga gawaarida
Shirarka Deegaanka ee Kusadasi Rugta Ganacsiga
Shirarka Silk Road ee ka socda Jarmalka iyo Turkiga Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha
Keenida Turkey si Noqo Trade Route
Wadada E-Commerce to SMEs laga bilaabo Shiinaha ilaa Yurub
Isku-xirka Tareenka ee Akhisar wuxuu noqonayaa Taariikh
33 Mileage iyada oo loo marayo Xiriirka ka dhexeeya Baskil Keban
Çamlıbel iyo Hisarköy way tagaan maxkamad
Xarunta Cilmi-baarista Kahramanmaras
network rail Turkiga
Xarunta Sayniska ee Turkoglu
Gaadiidka caalamiga ah
Apaydın: y Waaxda Socdaalka waxay ku noolyihiin dahab dahab ah Ap
Saacadaha ayaa isbeddelay line Line 200
Tilmaamta Sakarya Nostalgic Tram Tram ayaa la dhigay Coronavirus
Waxaa la shaaciyey Bisha Feebaraayo iyo Dakhliga Waddooyinka Waaweyn
Gawaarida xamuulka ee ay soo saarto TÜDEMSAŞ ayaa ku sii jeedda dalka Austria
Wadada tareenka ayaa ka gudbi doonta caqabad ku timaadda ganacsiga corona ee ganacsiga shisheeye
Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha ayaa had iyo jeer lagu daaraa Konya
Milkiileyaasha Gawaarida Ganacsiga Konyaaraha Digniinta ..!
Abaabulka Corona ee Kocaeli ..! Xadgudubyada ayaa la faafiyaa
Ogeysiis ka yimid ESTRAM ..! Waqtigii Eskart Loading Buffets wuu Bedelay
Basaska ku meel gaarka ah waxaa la sameeyaa iyadoo ay fasax ka helaan Xafiiska Gudoomiyaha Gobolka
Imamoglu: 'Ma Jiro Fikrad Bulsho oo Kanal Istanbul'
IMM si adag ayaa loo hubiyo Tallaabooyinka Coronavirus ee Gaadiidka